काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत दीपकराज जोशीलाई महाअभियोग लगाउने विकल्पबारे नेकपाभित्र छलफल सुरु भएको छ । ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति भएपछि अस्वीकृत जोशीले न्यायाधीशबाटै राजीनामा दिएर सुरक्षित बाटो रोज्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालको वरिष्ठतम न्यायाधीशको हैसियतमा धमाधम मुद्दा फैसला गर्न थालेपछि भने प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत व्यक्तिले कसरी न्यायाधीशको हैसियतमा पनि काम गर्न सक्छ ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
न्यायाधीशको हैसियतमा उनको कार्यसम्पादनलाई लिएर जुनजुन प्रश्न उठेको थियो र प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएका थिए, तिनै व्यक्तिले काममा फर्किन सक्छ कि सक्दैन ? स्वाभाविक रूपमा नैतिक प्रश्न उठेको छ । यही कारण संसदीय समिति सदस्य तथा नेकपाका स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईलगायतका नेताहरूले उनीमाथि संसदमा महाअभियोग दर्ता गर्ने विकल्पमा छलफल सुरु गरेका छन् । त्यसका निम्ति कतिपय सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलनसमेत भइसके पनि नेकपाको सचिवालय र स्थायी समिति बैठकमा भने कुनै औपचारिक छलफल भने भएको छैन ।
मिश्र प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएलगत्तै बसेको पहिलो फुल कोर्ट बैठकमा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लले अस्वीकृत व्यक्ति पुरानै जिम्मेवारीमा फर्किनुले न्यायालयकै गरिमामाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए । अन्य बहुसंख्यक न्यायाधीशहरूले पनि जोशीले जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिनु ठीक नहुने भाव प्रकट गरेका थिए । तर, उनले त्यसलाई मनन गर्न सकेनन् ।
त्यसो त कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले समेत जोशीलाई बोलाएर भेटेनन् मात्र, राजीनामा दिँदा नै उपयुक्त हुने आशयसहितको कूटनीतिक भाषामा संकेत नगरेका होइनन् । तर, कूटनीतिक भाषा नबुझेको भावमा ढकालसँगको पुरानो चिनजानसँग आश्वस्त हुँदै जोशी पूर्ववत् काममा फर्किएनन् मात्र इजलास फर्किएर मुद्दा पनि फैसला गर्न थाले । यद्यपि, उनलाई अहिलेसम्म एकलबाहेक संयुक्त इजलास भने तोकिएको छैन ।
जोशीले राजीनामा नदिनुलाई न्यायिक वृत्तमा दुईवटा कारणबारे मुख्य चर्चा हुने गरेको छ । पहिलो, संविधानअनुसार न्यायपरिषद् सदस्यका रूपमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशको हैसियतमा जोशीले बैठकमा भाग लिन पाउनेछन् । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र सरुवाबढुवामा महŒवपूर्ण निर्णय गर्ने संवैधानिक निकाय न्यायपरिषद् नै भएका कारण शक्तिको अभ्यासका कारण पनि उनी पुनः न्यायाधीशकै हैसियतमा सर्वोच्च अदालत फर्किएको बताइन्छ । त्यस्तै, न्यायाधीशहरूलाई तालिम सञ्चालन गर्नेलगायतको काम गर्ने संस्था न्यायिक प्रतिष्ठानमा पनि पदेन सदस्य हुन्छ । यी सबै कारणले गर्दा पनि जोशीले राजीनामा नदिएको चर्चा छ ।
नेता जुधाएर तर मार्ने कोसिस
सञ्चारमन्त्रीको मोबाइल ‘वान वे’